Wyndham Hotels & Resorts bịarutere Cambodia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Wyndham Hotels & Resorts bịarutere Cambodia
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Kambodia • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • Akụkọ okomoko • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Howard Johnson nke Wyndham gara n'ihu na mgbasa ya na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na oghere nke Blue Bay Sihanoukville na-esochi oghere ụzọ na-aga nke ọma maka akara na China na South Korea
Howard Johnson Plaza nke Wyndham Blue Bay Sihanoukville mepere yana Independence Beach
Wyndham na-aga n'ihu na uto ya na mpaghara Eshia Pacific
Sihanoukville bụ obodo dị jụụ na ọdụ ụgbọ mmiri na ọdụ ụgbọ mmiri Cambodian na isi obodo Sihanoukville Province
Wyndham Hotels & Resorts, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ nkwari akụ kasị ukwuu n'ụwa na onye na-eduga ọrụ nlekọta ọrụ ụlọ nkwari akụ nwere ihe karịrị ụlọ nkwari akụ 8,900 gafee ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba 95 na kọntinent isii, emepeela ụlọ nkwari akụ mbụ na Cambodia, ndị Howard Johnson Plaza nke Wyndham Blue Bay Sihanoukville, akara ohuru ohuru na ala oke osimiri nke obodo.
Howard Johnson nke Wyndham gara n'ihu na mgbasa ya na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na oghere nke Blue Bay Sihanoukville na-esochi oghere ụzọ na-aga nke ọma maka akara na China na South Korea. Howard Johnson nke Wyndham bụ akara ama ama zuru ụwa ọnụ nwere ụlọ nkwari akụ n'ihe karịrị ọnọdụ 320 gafere mpaghara atọ: North America, South America na Asia. Hotellọ nkwari akụ 522-elu upscale bụ ihe mgbakwunye ọhụrụ na Wyndham Hotels & Resorts 'pọtụfoliyo karịrị 1,500 hotels gafere mpaghara Asia Pacific.
“Obi dị anyị ụtọ ịme Wyndham Hotels & Resorts abanye na Cambodia na mmeghe nke Howard Johnson Plaza nke Wyndham Blue Bay Sihanoukville. N'ofe Asia Pacific, anyị na-agba mbọ itolite pọtụfoliyo anyị na ebe ndị ịtụnanya - dị ka Sihanoukville - ma anyị nwere obi ike na ebe nkwari akụ ahụ dị n'akụkụ ụsọ oké osimiri, tinyere ọmarịcha ihe eji enyere ndụ aka, ga-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ebe kachasị mma ịnọ. obodo ahụ, ”ka Joon Aun Ooi, Onye isi ala, Asia Pacific, Wyndham Hotels & Resorts kwuru.
"Nke a bụ ihe ịrịba milestone oghere maka Wyndham na anyị na-atụ anya ịnọgide anyị ike uto ọkụ. Site na pipeline siri ike nke aha na njikwa nkwekọrịta gafee mpaghara ahụ, anyị na-atụ anya ihe karịrị oghere 100 na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na afọ 3-5 na-esote. Nke a ga-eme ka uru anyị bara uru maka ndị otu Wyndham Rewards dị ike yana nke ahụ maka ndị nwe anyị na ndị mmekọ anyị, ”ka ọ gbakwụnyere.